အိုးကောင်းလို့ ဒိုးတောင်း – Grab Love Story
ဖြန်း …. ဖြန်း … ဖြန်း …”ဒီနေ့… ခင်မေလွင် ကံမကောင်းပါ ။ ဆရာမ အတန်တန်မှာလိုက်သည့် အိမ်စာ ယူမလာ၍ ကောင်းကောင်း ဆော်ပလော်တီး ခံလိုက်ရသည်။ဆရာမ ဒေါ်အိစန္ဒာက သူ့ ကိုကြည့်မရဟု ခင်မေလွင် ထင်မိပါသည်။ အကြောင်းကတော့ တကသိုလ် တခုလုံးမှာ ဒေါ်အိစန္ဒာက အတောင့်ဆုံး ၊ အဖြောင့်ဆုံးလေ ။ သိတယ်မဟုတ်လား ။ အထူးသဖြင့် သူ့ တင်ပါးကြီးတွေက အယ်ပြီးကားထွက်နေတာ ။ အသားညိုပေမယ့် ရုပ်လဲလှ ၊ ဖင်တုံးကြီးကလဲ အိအိလေး ၊ ခါးလေးကလည်း သိမ်သိမ်လေးဆိုတော့ သူ့ ကိုယ်သူ အလှနတ်သမီးလေး မှတ်နေတာ ။ ခင်မေလွင်က ဆရာမနဲ့ပြိုင်ဖက်ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်သွားတော့တာကိုး .. ။ ခင်မေလွင်က ဆရာမထက် အများကြီးငယ်တယ် ။ ၁၈ နှစ်ပေါ့ … ။ လုံးကြီးပေါက်လှ အစားထဲက … ဘာမှတ်လဲ ။ ဖြူဖြူချောချော ၊ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် ၊ ရင်ထွားပြီး တင်ကား ၊ တရုပ်စပ်လေ ။ ဆရာမနဲ့ခင်မေလွင် ယှဉ်လို်က်ပါက … တခြားပစ္စည်းတွေက သူမသာကိုယ်မသာ.. ဆိုတော့ … အသက်အရွယ်အားဖြင့်ဆိုလျင် ခင်မေလွင်က နိုင်သွားပြီလေ ။ ခင်မေလွင့် အိုးကြီးက ဆရာမနဲ့နင်လားငါလား … ။
ဒါ့ကြောင့်ပင် … ဆရာမက ခင်မေလွင်ကို အညှိုးနဲ့တွယ်ထဲ့လိုက်တာ နေမှာပေါ့ ။ နောက်တစ်နေ့…. ။ ခင်မေလွင် ဆရာမကို စိတ်ထဲမကျေနပ်သဖြင့် ဒီနေ့ ကျောင်းမတက်တော့ဟု ဆုံးဖြတ်မိ၏ ။ “ သမီးရေ .. အမေဈေးသွားမယ်ဟေ့ … ဘာစားချင်လဲ … ” “ အာ … အမေကလဲ … အမေကြိုက်တာဝယ်ခဲ့ပေါ့ … ” အမေ ဈေးထွက်သွားသွားချင်း .. ခင်မေလွင်တယောက် အိမ်တွင်တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့ကာ … လွတ်လပ်သွားသလို ခံစားမိလေ၏ ။ သို့ ရာတွင် … သူ့ တင်ပါးမှ အရှိူးများ အတွက်တော့ ဆေးတခုခု လိမ်းဦးမှဖြစ်မည် ။ “ အမလေး .. ခုမှ ပိုနာလာသလိုပဲ … ကျွတ် … ကျွတ် … ” လိမ်းဆေးကို အလွယ်တကူပင် ဧည့်ခန်းက အံဆွဲထဲတွင် ရှာတွေ့ သည် ။ သို့ ဖြင့် .. ခင်မေလွင်က .. ဧည့်ခန်းတွင်ပင် ဆေးဘူးကိုဖွင့်လိုက်ပြီး .. ဒူးထောက်ကာ ထမိန်ကို ပင့်တင်၍ … တင်ပါးရှိ အရှိုူးရာများကို စိန်ပြေနပြေပင် ဆေးလူးလေတော့သည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီတော့ ဝတ်မထားပါ ။
“ အား .. ပါး .. ပါး .. နာလိုက်တာ … တော်တော်ဆိုးတဲ့ ဆရာမ … အား … ကျွတ် … ကျွတ် .. ကျွတ် … ” ခင်မေလွင်သည် သူမ၏ ဖင်တုံးလေးပေါ်က အရှိူးတွေကို ဆေးလူးရင်း .. ဆရာမကိုလည်း မေတ္တာပို့ လျှက် … ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် တွေးတောလျက်ရှိသည်။ “ ဆရာမက ငါ့ကို မုန်းမှာပေါ့ … ငါ့ဖင်တုံးကြီးက သူ့ ထက်ပိုကြီးပြီး ပိုတင်းတာကိုး … ။ ဟိုကောင် စိုးမင်းတို့ မျိုးကျော်တို့ ၊ ကောင်တွေကလည်း ငါကျောင်းဆင်းအိမ်ပြန်တိုင်း ငါ့နောက်ကလိုက်ပြီး သွားရည်တမြှားမြှားနဲ့… ငါ့ဖင်တုံးကြီးကို … လိုက်ချောင်းနေကြတာ မသိဘူးမှတ်နေလား … ။ ” “ ငါပြောပြမယ် … နင်တို့ တော့ .. ငါ့အိုးကြီးကို လိုးရမှာ မဟုတ်ဖူး ။ ” “ အင်း … ဒါဖြင့် နေပါဦး .. ငါ့ရဲ့ ဖင်တုံးတောင့်တောင့်ကြီးနဲ့.. အဖုတ်လေးကို .. ဘယ်ကိုကိုကများ လိုးပေးမှာလဲဟင် … ” ခင်မေလွင်တယောက် .. သို့ ဂလို တွေးတောနေမိပြီးသကာလ … စောက်ပတ်ကလေးများပင် တောင်လာလေသည်။ သူ၏ လက်တဖက်က ထမိန်ကို လှန်ထားပြီး ၊ အခြားလက်တဖက်က တင်ပါးကို နောက်ပြန် .. ဆေးလူးနေရာမှ .. ထိုလက်ကလေးမှာ သူ၏ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးပေါ်သို့ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားလေသည်။ ဒူးထောက်ကာ ထားသဖြင့် သူ၏ စောက်ဖုတ်ကလေးမှာ နောက်ဖက်သို့ပြူထွက်လျက်ရှိသည်။
မို့ ဖောင်းပြီး .. မာတောင့်လို့ လည်းနေပေပြီ။ သူမသည် စောက်ဖုတ်အပေါ်ပိုင်းတွင် ပေါက်စပြုနေပြီဖြစ်သော အမွှေးနုနုကလေးများကို လက်ဖြင့် အသာအယာပွတ်လိုက်ကာ … တစ်မျိုးတမည်လေး ကောင်းသော အရသာကို ခံစားမိလေသည် ။ သူမ၏လက်ကလေးက စောက်ဖုတ် မို့ မို့ လေး၏ အကွဲကြောင်းလေး တလျှောက်ကို တဖြေးဖြေး မသိမသာ ရောက်လာကာ ပွတ်မိနေရင်း .. အရသာတွေ့ နေတော့သည် ။ ထို့ နောက်မှ တဖန် စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းလေးကို လက်ညှုိးု လက်ခလယ် နှစ်ချောင်းဖြင့်သာသာလေး ဖြဲဟလိုက်ပြီး … ကျန်လက်မှ လက်ခလယ်ဖြင့် အပေါက်လေးထဲကို သာသာလေး ထိုးထည့်ကြည့်လိုက်ရာ … လူတကိုယ်လုံး ဆတ်ကနဲဖြစ်သွားပြီး .. အရမ်းကို ကောင်းနေပြန်ပါသည် ။ သိပ်မကြာပါ ။ ခင်မေလွင်တယောက် သူ၏လက်ချောင်းလေးကို သူ့ စောက်ပတ်ကလေးထဲ ခပ်သွက်သွက်ပင် နှိုက်လိုက် ၊ ဆွထဲုတ်လိုက် ‘တဗြွတ်ဗြွတ်’ နှင့် … လီးတစ်ချောင်းက လိုးပေးနေသည့်အလား ခံရခက်ကာ … “ အ …. အ …. အား …. ကောင်းလိုက်တာ … ကောင်းလိုက်တာ … အ … အ …. ” ဟု အော်မြည်လျှက် … အလိုးခံချင်စိက်များ ဒလဟော ဖြစ်ပေါ်လာလေ၏ ။ သူမ၏ စောက်ဖုတ်ကလေးမှလည်း .. အရည်လေးများ ထွက်လို့ လာပါသည် ။ “ အား … အား .. အဟင့် … အဟင့် … အီး … အီး … ရှီး … ကောင်းလိုက်တာ … ကောင်းလိုက်တာ .. အ … အ … အား …လိုး … လိုး … ” ဟုလည်း မပြတ်အော်မြည်လျှက် ရှိနေတော့လေသည် ။
ထိုစဉ် …. “ ဒေါက် ……. ” “ အမလေး … ” ခင်မေလွင်တယောက် .. မည်မျှ … ကိုယ့်ဘာကိုယ် စောက်ဖုတ်ကလေးကို နှိုက်ကောင်းကောင်းနှင့် နှိုက်နေသည်မသိ ။ သူ့ နောက်ဆီမှ အသံကြားရသဖြင့် … အလန့် တကြား လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ …. အိမ်ကိုနွားနို့ ပို့ နေကြ … မာမွတ်ဆိုသော ကုလားလေး ဖြစ်နေသည်။ မာမွတ်ကို … ခင်မေလွင် ကောင်းကောင်းသိသည် ။သူက မွတ်စလင်လူမျိုး ၊ အသက် ၁၇ နုစ်ခန့်ရှိမည်။ အသားက ခပ်မည်းမည်း ၊ နေ့ စဉ်နွားနို့ညှစ်ရသဖြင့် တောင့်တင်းသန်မာသော ကိုယ်ခန္ဒာ ။ မျက်ခုံးမွှေး ထူထူနှင့် နှာတံ ခပ်ကောက်ကောက် ။ ရုပ်ကတော့ .. ခင်မေလွင်ကြည့်ဖူးသော ကုလားကားထဲက မင်းသားတယောက်ယောက်နှင့် တူသလိုလို ။ မာမွတ်က နေ့ တိုင်းလိုလို ခင်မေလွင်တို့ အိမ်ကို နွားနို့ ပ်ို့ နေကျ ။ မာမွတ်တယောက် … မည်သည့်အချိန်ကတည်းက ရောက်လာပြီး ခင်မေလွင်ကို ကြည့်နေသည်မသိ ။ ခင်မေလွင် ကိုယ့်ဖာကိုယ် စောက်ဖုတ်လေးကို ဖြဲပြီး .. လက်ဖြင့်နှိုက်ကာ ရေရေလည်လည် ဖီးလ်တက်နေသည်ကို … သူ .. တွေ့ ပေလိမ့်မည် ။ ကြည့်လိုက်ပါ … ။ သူ့ ပုဆိုးထဲက လီးကြီးက ထောင်မတ် ထိုးတွက်နေသည်ကိုက သက်သေမဟုတ်လား … ။ မာမွတ်က … ခင်မေလွင်တယောက် သူ့ စောက်ဖုတ်လေးကို သူ့ ဖာသူ အသားကုန် နှိုက်နေသည်ကို … အစအဆုံး မြင်တွေ့ ရသည်ဖြစ်ရာ … သူ၏လီးကြီးမှာ တောင်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည် ။
သူက ခင်မေလွင် ရှက်သွားမည်စိုးသဖြင့် လှည့်ပြန်သွားရင် ကောင်းမလားဟု စဉ်းစားနေမိသော်လည်း … ခင်မေလွင်က ပါးစပ်မှ “ အိ .. အိ .. အ .. အ .. လိုး …. လိုး … ” ဟူသော အသံတွေပါ ထွက်နေသောအခါတွင်တော့ … သူ့ ကိုပင် ဖိတ်ခေါ်နေသကဲ့သို့ရှိနေသဖြင့် စိတ်မထိန်းနိုတော့ပဲ ခင်မေလွင့်ကို ချက်ချင်းပင် တက်ခွ၍ လိုးပေးပစ်လိုက်ချင်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာကာ … သူမအနား ချဉ်းကပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေတော့၏ ။ “ ဟယ် … မာမွတ် ….. ! ” ခင်မေလွင် တယောက် မထင်မှတ်ပဲ မာမွတ်ကိုတွေ့ လိုက်သည်နှင့် … ရှက်လဲရှက် … ။ ရုတ်တရက်မို့ဘာလုပ်လို့ဘာပြောရမှန်းမသိ။ လူမိသွားပေပြီ ။ ထမိန်ကြီးကို လှန်လို့၊ ကောင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ သူ့ အိုးကြီးက မာမွတ်ရဲ့ရှေ့ မှောက်မှာ .. ။ ဖြဲထားတဲ့ သူ့ စောက်ဖုတ်ကလေးကလဲ .. မာမွတ်ကိုပဲ ‘ လိုးပစ်လိုက်ပေတော့’ ဟု တမင်ဖြဲပေးထားသလိုလို … ။ ခင်မေလွင်တစ်ယောက် ကြောင်တောင်တောင်ဖြင့် … မာမွတ်ကို ကြည့်၍နေပေသည် ။ မာမွတ်ကတော့ … ခင်မေလွင်၏ ပြူထွက်နေသော စောက်ဖုတ်လေးနှင့် ဖြူဖွေးဝင်းလက်နေသော ဖင်တုံးကြီးများကို တဏှာမျက်လုံးများဖြင့် စိုက်ကြည့်လျက် … ။ သူ၏ ပုထိုးကြားထဲမှ ထောင်ထွက်နေသောလီးကြီးက နဲနဲနောနောမဟုတ်…. ။ “ အဲဒီလီးကြီးနဲ့ များ … ငါ့စောက်ဖုတ်လေးထဲက်ို … လိုးထည့်လိုက်လို့ ကတော့ … ငါတော့သေပါပြီ … ” ဟုပင် ခင်မေလွင် တွေးမိလေသည် ။
ခင်မေလွင်တစ်ယောက် … ခြင်္သေ့မင်းရှေ့အစားခံရန် ရောက်ရှိလာသော .. သမငယ်မလေးကဲ့သို့.. ခိုကိုးရာမဲ့ ..။ မာမွတ်က ခင်မေလွင်၏ ကိုယ်လုံးလေးက်ို သန်မာသော လက်များဖြင့် ရုတ်တရက် သိမ်းကြုံးကာ ဖက်ပစ်လိုက်သည်ဖြစ်ရာ … သူ၏ တောင့်တင်းမာထန်နေသော လီးတန်ကြီးမှာလည်း … ခင်မေလွင်၏ ဖင်တုံးအကြွဲကီးထဲကို အလျားလိုက်ကြီး ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ပင် ရောက်ရှိထောက်မိ သွားလေတော့၏ ။ ခင်မေလွင့်ခမျာ … သူမ၏ အိုးကြီးပေါ်ကို လီးတန်ပူပူနွေးနွေးကြီးဖြင့် ဖိကပ်ခံလိုက်ရ၍ သူမ့တကိုယ်လုံး ဆတ်ကနဲ တုန်သွားရာမှ .. သူမ၏ ဖင်တုံးများကြီးများကို လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်ဖြင့် မာမွတ်၏ လီးတန်ကြီးမှ ရှောင်ဖယ်ရန် ကြောက်လန့် တကြား အတင်းရုန်းလေတော့၏ ။ “အား … အား …. ဟဲ့ မာမွတ် … နင်ဘာလုပ်တာလဲ … … အား … ” ခင်မေလွင်၏ ထမိန်နှင့် သူ၏လုံခြည်တို့ ကို ဆတ်ကနဲ ဆြွဲခွတ်လိုက်ပြန်လေသည် ။ မာမွတ်ကား မုန်ယိုနေပေပြီ … ။ ခင်မေလွင်တယောက် မာမွတ်၏ ရင်ခွင်ထဲမှာ ရုန်းမရ ၊ ပြုမရ … ။ စောစောတုန်းကတော့ လိုးချင် ၊ ခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း … တကယ့်တကယ် အလိုးခံရတော့မည်ဆိုတော့… ရင်တွေပန်းတွေတုန်ကာ ကြောက်လန့် ပြီး ကယောင်ကတန်း အော်ဟစ်လတော့သည် ။
ခင်မေလွင့် ဖင်တုံးကြီးထဲ နစ်မြုတ်နေသော သူ့လီးကြီးကလည်း .. တောင့်ဖြောင့်စွင့်ကားလှသော ခင်မေလွင့် အိုးကြီးကို နောက်ကနေထောက်ကာ တွန်းထိုးလျက် … နှစ်ယောက်သား အသားကုန် ရုန်းရင်းကန်ရင်းဖြင့် အခန်းအတွင်းသို့ရောက်မှန်းမသိ လုံးထွေးကာ ရောက်ရှိသွားခဲ့လေတော့သည် ။ မာမွတ်လည်း ခင်မေလွင့် ညဝတ်အင်္ကျီလေးကို ဆွဲချွှတ်လိုက်ပြန်ပါသည် ။ ဖွံ့ ထွားပြီး ဖြူဖွေးနုရွလှသော ခင်မေလွင်၏ နို့ အုံဝိုင်းဝိုင်းကလေးများက လပြည့်ဝန်းလေး ထွက်ပေါ် လာသည့်အလား … ညဝတ်အင်္ကျီလေးထဲမှ ဖိတ်ရှံထွက်ကျလို့လာပါတော့သည် ။ မာမွတ်တစ်ယောက် .. ပါးစပ်ဖျားမှ … ‘အလာရေ .. နင် .. အရမ်းလှလိုက်တာ .. ခင်မေလွင်ရယ် ..’ ဟုပင် တမ်းတမိလေတော့ကာ .. ခင်မေလွင်၏ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး နို့ အုံးလေးများကို သူ၏လက်ကြမ်းကြီးဖြင့် ဖိအုပ်ပွတ်ချေကာ .. ပန်းရောင် နို့ သီးခေါင်းများအားလည်း အထက်အောက် လျှာကြမ်းကြီးဖြင့် ပွတ်ဆွဲပါလေတော့သည် ။ မာမွတ်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်း ခင်မေလွင့် အပေါ်သို့ တဖြေးဖြေး အုပ်မိုးခွစီးလာလေသည်။ သူ၏ လီးပူပူကြီးက ခင်မေလွင်၏ အဖုတ် ဖောင်းဖောင်းလေး အပေါ်ကို အလျားလိုက် ဖိပြီးကပ်ထားမိလေရာ … ခင်မေလွင် လူးလွန့် လိုက်တိုင်း လီးနှင့် စောက်ဖုတ်ကလေးတို့့ ပွတ်ကာပွတ်ကာ ရှိနေလေတော့ ခင်မေလွင် ရင်ဖိုစွာ မောပန်းလို့ လာပါတော့သည် ။
အခန်းထဲမှာ … နှစ်ယောက်သား၏ အသက်ရှူသံ ပြင်းပြင်းပျပျလေးများ … တုန်ရီလှိုက်မောနေသော ရင်ခုန်ုသံများသည်သာ … ထွက်ပေါ်လျက် ရှိနေပါတော့သည် … … ။ – ခင်မေလွင် ဘာကြောင့်မှန်းမသိ။ မျက်စေ့အစုံကို ဇွတ်မှိတ်ထားမိသော်လည်း .. အသိစိတ်များကမူ မာမွတ် ဘယ်နားကိုကိုင်သည် ဘာလုပ်နေသည်ကို သိနေသည်။ မာမွတ်ထံမှ ပူနွေးသော ၊ အသက်ရှူရှိုက်သောလေကို သူမ .. မျက်နှာပြင်၌ ထိတွေ့ခံစားရ၏။ နွားနို့ နံ့ သင်းသော ယောက်ျားရနံ့ တစ်မျိုးကိုလဲ ခင်မေလွင်ရနေ၏။ မာမွတ်က ခင်မေလွင်၏ ပါးပြင်မို့ မို့ ကလေးကို .. တရှိုက်မက်မက် အားရပါးရ နမ်းရှုတ်လိုက်ပြီး … “ ခင်မေလွင်လေးရယ် .. နင့်ကို .. ငါ .. အရမ်း .. လိုးပေးချင်တယ်ကွာ ..” ဟု တုံရင်စွာ .. ပြောဆိုလိုက်လေသည် ။ ခင်မေလွင် … ခုန်လိုက်တာ.. ရင်တွေ … ။ တလှပ်လှပ်ကို မောနေသည်။ မာမွတ် စကားတွေ ပြောနေသည်ဟုတော့ ခင်မေလွင်ထင်၏။ စကားလုံးများက တုန်ခါနေသလို .. တိုးလွန်း ၊ ညင်သာလွန်းပြီး … ကြိပ်၍ပြောသော စကားများဖြစ်၍ မသဲမကွဲ လေသံမျှလောက်သာ တီးတိုးပြောနေခြင်း ဖြစ်၏။ မာမွတ်၏ စကားလုံးများက ခင်မေလွင့်ရင်ကို ပူနွေးလှိုက်ဖိုစေရုံမျှမက မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို ထူပူသွားစေပါသည်။ “အို.. ကျွတ်..” မာမွတ်က ခင်မေလွင့် နို့နှစ်လုံးကို ကိုင်ပြီး နယ်ပေးနေပြန်တယ်။
“ဟာ.. အား.. ကျွတ် .. ကျွတ်..” ကောင်းတော့ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှက်တာလဲ လွန်ရောပဲ။ မာမွတ်အဲဒီလိုလုပ်လေ ခင်မေလွင်က မျက်စေ့တွေကို တင်းတင်း ပိတ်ထားမိလေပဲ။ နွေးနွေးပူပူ သူ့အာခံတွင်းမှာ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို စို့ ပေးနေပြန်တော့ .. ခင်မေလွင့် စောက်ဖုတ်လေးဆီက ‘ဖြင်း’ ကနဲ ရွစိရွစိဖြစ်ကုန်ပြီး … ဖင်ကြီးကို အပေါ်ကို ကော့ထောင်လိုက်မိလိုက်ပြန်တော့ … မာမွတ်ရဲ့လီးကြီးနဲ့သူ့ စောက်ဖုတ်ကလေး ခပ်ကြမ်းကြမ်းကလေး ပွတ်ဆွမဲိပြန်ပါတယ် ။ “အား .. သေပါပြီ .. ဟင့် .. ဟင့်” ခင်မေလွင့် နို့နှစ်လုံးက စိမ်းစားဥလေးတွေလို ဖွေးဥနေတာ .. ။ အခွံနွှာထားတဲ့ စိမ်းစားဥမျိုးပေါ့။ ခုံးလုံးပြီး ကျစ်မာနေတာ။ မာမွတ်ကလည်း သိတဲ့အတိုင်း .. ထန်နေပြီဆိုတော့ .. ဖြစ်နိုင်ရင် ခင်မေလွင်ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို .. ကိုက်စားဝါးမြိုပြစ်ချင်လောက်အောင် ဖြစ်နေတာ။ မာမွတ်က ခင်မေလွင်၏ အကြာစိမ်းကလေးများ ထောင်ထွက်နေသော ဗိုက်သားဝင်းဝင်းလေးကိုလည်း တစ်ချက်နမ်းပြီးမှ စောက်ဖုတ်လေးက်ို လက်ဝါးကြီးဖြင့် အုပ်ကာ .. ပွတ်ခါပွတ်ခါ .. ဆွပေးရာ .. ခင်မေလွင်၏ ပန်းနုရောင် စောက်ဖုတ်လေးနှစ်ခြမ်းသည် ပွင့်အာလို့ သွားလေသည်။ မာမွတ်က ခင်မေလွင်၏ ဘေးတစ်ဘက်ဆီသို့ ကားထွက်သွားသော ပေါင်တံဖြူဖြူလေးနှစ်ဖက်ကို ကွေးကာ မြောက်တင်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ဖေါင်းကားခုံးထနေသော ခင်မေလွင်၏ စောက်ပတ်ကလေးမှာ အလိုးခံရန် အသင့်အနေအထားသို့ ရောက်သွားလေသည်။ ပေါင်နှစ်ဖက်က ဗိုက်သားများနှင့် ပြန်ကပ်နေ၏။ ခင်မေလွင့် ဒူးနှစ်ဖက်ကို မာမွတ်က သူ့ ပုခုံးဆီရောက်အောင် အောင်ပင့တ်င်လိုက်ရာ … ခင်မေလွင့် စောက်ဖုတ် ဖြူဖြူဖောင်းဖောင်းလေးက.. လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီး ပြူးထွက်လို့ လာ၏။ ခင်မေလွင်၏ တောင့်တင်းပြီး ဖြူဖွေးနုထွတ်နေသော ပေါင်တံလေးတွေပေါ်ကလည်း အတွင်းက အကြောစိမ်းကလေးများကိုပင် မြင်နေရသည် ။
မာမွတ်က ခင်မေလွင်၏ နှင်းဆီရောင် စောက်စိထိပ်ကလေးကို .. လီးထိပ်ဖြင့် ဖိပွတ်ထိုးဆွပြီး … အကွဲကြောင်း အတိုင်း အောက်ဖက်သို့ လီးထိပ်ကြီးကို ဆွဲယူသည်။ တဖြင်းဖြင်း တသိမ့်သိမ့် အရသာသည် ခင်မေလွင့် ကိုယ်ခန္ဓာ တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံပစ်လိုက်ခြင်းခံရ၏။ မာမွတ်၏ လီးထိပ်ကြီး သူ့ စောက်ဖုတ်ကလေး အဝကို ရောက်တော့မယ် .. ရောက်တော့မယ်ဟု မျက်စိမှိတ်ခံစားရင်း … ၊ ပူနွေးနူးညံ့သော လီးထိပ်မှ အထိအတွေ့ကို … ရင်တခုန်ခုန်နှင့်ခံစားရင်း … သူ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲ လိုးဝင်သွားမည့် အချိန်ကို ခင်မေလွင်တယောက် ရင်ခုန်စွာ စောင့်နေမိသည် …ခင်မေလွင်တယောက် ရင်ခုန်စွာ စောင့်နေမိသည် … ။ …… မာမွတ် အချိန်ဖြုန်းမနေနိုင်ပါ ။ သူ၏ တောင့်တင်းတုတ်ခိုင်ကာ တုန်ခါနေသော လီးမဲမဲကြီးကို … ခင်မေလွင်၏ စောက်ဖုတ် ဖောင်းဖောင်း နီနီလေးထဲသို့ဖိ၍ထိုးသွင်းလိုက်လေရာ … ကျွံဝင်သွားသော လီးထိပ်ကြီးနှင့် ခင်မေလွင့် စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းကြားမှ အသံ အစ်အစ်ကလေး ထွက်လာသည်။ “ ဗြစ်.. ပြွတ် …” “ အ .. အီး … အဟင့်ဟင့်.. မာမွတ် … အ …” ခင်မေလွင် အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိကိုက်ထားရင်း တင်းခံထားသော အသက်ကလေးကို အောင့်ထားလိုက်သည်။ ဝင်နေသည့် မာမွတ်၏ လီးတန်ကြီးက .. တရွေ့ရွေ့ သူမ၏ စောက်ခေါင်းလေးထဲသို့ တိုးဝင်သွား၏။
ခင်မေလွင့် စောက်ပတ်ကလေး ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အလိုးခံရချေပြီ … … … ။ “ ပြွတ် … ဘွတ် …” လီးကို တင်းတင်းစီးစီးလေး ဖိအသွင်း၌ စောက်ပတ်အတွင်းမှ လေများ “ဘွတ်” ခနဲ အန်ထွက်လာသည်။ “ဟင့် .. မာမွတ် .. နင်ငါ့ကို အဲလိုကြီး မလုပ်နဲ့ဟာ… ” ခင်မေလွင်က ရှက်လဲရှက် ၊ ကြောက်လဲကြောက်သည်မို့ … စိုးရိမ်သံလေးနှင့် ရင်ခုန်စွာပြောမိ၏။ “ ပြွတ်ဘွတ် … ပြွတ်ဘွတ် … ပြွတ်ဘွတ် …” “ ငါလေ .. နင့်ကို .. ချစ်လ်ို့ ပါဟယ် .. နင်ကလဲ.. ” တီးတိုးအသံလေးများ နူးညံ့စွာ ထွက်ပေါ်နေစဉ်မှာပင် .. မာမွတ်ဖင်ကြီးက တသိမ့်သိမ့် လှုပ်ခါယမ်းကာ တဖြေးဖြေး အဆောင့်ကြမ်းလာလေရာ .. ခင်မေလွင့် စောက်ပတ်လေးနှင့် မာမွတ်ဆီးခုံကြီး ဖေါင်းကနဲ .. ဖေါင်းကနဲ မြည်အောင်ပင်ရိုက်ခပ်မိသွားပြီး .. စောက်ပတ်တစ်ခုလုံး ထူပူသွားလေသည်။ “ မာမွတ်.. နင်ရက်စက်တယ် .. အ .. အ .. အ ..” “ ပြွတ် … ပြွတ် …ဘွတ် … ဘွတ် .. ပြွတ် … ဘွတ် … ” ခင်မေလွင်သည် အရူးမီးဝိုင်းသလို ခေါင်းကို ဘယ်ညာတအားခါယမ်းမိ၏။ သူ့ စောက်ဖုတ်လေး အတွင်းသို့ သံချောင်းကြီး တစ်ချောင်းအလား စူးကနဲ ၊ နင့်ကနဲ ထိုးထွင်းဝင်လာသော မာမွတ်၏ လီးကြီးက အဆုံးအထိပင် လိုးဝင်ကာ .. “ထုတ် ” ကနဲ “ထုတ်” ကနဲ ဆောင့်မိသွားသည်မှာ … ဆီးစပ်တစ်ခုလုံး ကျင်သွားကာ … ရှိန်းကနဲ လျှပ်စစ်ဓါတ်တွေ စီးဝင်သွားသလို တုန်တုန်ခါခါလေး ခံစားလိုက်ရသဖြင့် …. ။ “ ဆောင့် …. ဆောင့် … အ … အ … လိုး … လိုး … မာမွတ် … အိုး … အိုး …” ခင်မေလွင်တယောက် … ကိုယ့်ဖင်ကြီးကို မရှက်နိုင်တော့ပဲ ဆွဲကာဆွဲကာ ဖိချရင်း … ခါးလေးကို ကော့ကာကော့ကာ ပေးလိုက်လေသည်။ မာမွတ်၏ လီးတန်ကြီးကလည်း အဆုံးအထိပင် ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နှင့် စောက်ပတ်အတွင်းရှိ အသားမျှင်များကို ထိုးပွတ်ကာ ဆောင့်ကာဆောင့်ကာ လိုးမိသွားလေသည်။
ခင်မေလွင့် ဖင်တုံးလေးတွေပေါ်က အစောတုန်းက နာလှပါသည်ဆိုသော အရှိုးများကပင် ခုတော့ … မာမွတ်၏ တစ်တစ်ခွခွ လိုးခြင်းအောက်၌ … တဒင်္ဂအားဖြင့်မေ့ပျောက်သွားခဲ့ရလေပြီ …. ။ “ ကောင်းတယ် .. အ .. အလိုးခံလို့အရမ်းကောင်း တယ်မာမွတ်ရယ် … နာနာလေးဆောင့်စမ်းပါ … အ .. အ .. အား … လိုး …. လိုး …. ” ခင်မေလွင် နှုတ်ခမ်းလေးများ တဆတ်ဆတ်တုန်နေကာ .. လက်ချောင်းလေးများ ကုတ်ကွေးကာ မာမွတ်၏ ဖင်များကို အဝတ်စ တစ်ခုနှယ် ဆုတ်ကိုင်ကုတ်ဖဲ့လိုက်မိလေ၏။ စူးကနဲလက်သည်းများ နစ်ဝင်သွားသည်ဟု ခံစားလိုက်ရသော မာမွတ်လည်း … ကျားသစ်တစ်ကောင်နှယ် … “ အီး ..” ကနဲ “ အီး .. ” ကနဲ အသံမြည်အောင်ပင် ခင်မေလွင့် စောက်ပတ်လေးထဲသို့ သူ၏ ကြီးမား တုတ်ခိုင်လှသောလီးမဲကြီးကို အားမနာတန်း … အားရပါးရကြီး ဆောင့လ်ိုးလိုက်လေတော့သည် .. ။ “ ပြွတ် … ဘွတ် …ပြွတ်ဘွတ် … ပြွတ်ဘွတ် ” ” အား… အား … ရှီး … ရှီး … လိုး … လိုး … ” ခင်မေလွင်ဆိုသော ကောင်မလေးတယောက် အရူးအမူးဖြစ်ခါ လီးအရသာကိုတွေ့နေခိုက် .. သူမ၏ စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းက ကြီးမားသော မာမွတ်၏ လီးမဲမဲကြီးအဝင်အထွက်၌ ဘေးသို့ ပြန့်ကားလိုက် စုလိုက်ဖြင့် လှုပ်ရှားနေသည်။ မာမွတ်၏် ဂွေးစိကြီးများကမူ ခင်မေလွင့် စောက်ဖုတ်အောက်ခြေ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားကို ဖတ်ခနဲ .. ဖတ်ခနဲ မှန်မှန်ရိုက်ပေးနေသည်။ မိုးပေါ်သို့ ဖဝါးလှန်ကာ မြောက်ထားသော ခင်မေလွင့် ခြေချောင်းလေးများ ကုတ်ကွေးနေရှာသည်။
“ ကောင်းလိုက်တာ .. မာမွတ်ရယ် .. အ .. အ .. အ ..”“ ခင်မေလွင်ရယ် .. ငါ … နင့်ကို အရမ်း … ချစ်လိုက်တာဟယ် …” ” ချစ်.. ချစ် .. အားရအောင် ချစ်စမ်းပါ .. မာမွတ်ရယ်.. လိုးထား … လိုးပေးထား … အ .. အ .. အားးး ” ခင်မေလွင်က တစ်ဖက်က ကောင်းကောင်းကြီး ကော့ကာကော့ကာ အလိုးခံရင်း … မာမွတ်၏လည်ပင်းကို ဆွဲယူလျက် … ပါးပြင်ကိုနမ်းကာ .. ကျေကျေနပ်နပ်လေး ရေရွတ်လိုက်လေသည်။ မာမွတ်ကလည်း ခင်မေလွင်၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို .. ဖက်စုပ်ယူရင်း … သူ့ ဖင်ကြီးကို ဆတ်ကနဲ .. ဆတ်ကနဲ .. ဆောင့်လိုက်ရာ သူရော ခင်မေလွင်ရော နှစ်ဦးစလုံး တွန့်တွန့်လူးသွားကြရလေသည်။ မာမွတ်က ခင်မေလွင့်ဖင်တုံး ဖြူဖြူတောင့်တောင့်တင်းတင်းကြီးကို ဆွဲမြောက်လိုက်၏။ လုံးပတ် ငါးလက်မနီးပါး ကြီးမားကာ စောက်ရေများနှင့် ပြောင်လက်နေသော မာမွတ်၏ လီးကြီးက ခင်မေလွင့်စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ ကျွတ်လုနီးပါးထွက်လာသည်။ ခင်မေလွင့်စောက်ပတ် အကွဲကြောင်းလေး အောက်ခြေ၌ ဖြူလွလွ ပူစီဗောင်းလေးများ အစီအရီ စုပြုံတွဲခိုနေကြသည်။ တင်းတင်းလေး စေ့သွားသော အကွဲကြောင်းကြားမှ မာမွတ်၏ လီးဒစ်ကြီးကား အပြင်သို့ ‘ဖွတ်’ ကနဲ ဆွဲထွက်လာသည် ။
ခင်မေလွင့် စောက်ပတ်အတွင်းသား ရဲရဲလေးများ လန်ထွက်လာ၏။ “ ရှူး .. အား .. ကျွတ်ကျွတ် .. မာမွတ်ရယ် … ။ နင့်ဟာကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်တာ ငါ့ရင်ထဲကိုဟာတာတာကြီး ဖြစ်ပြီး ကျန်ရစ်တာပဲ .. တစ်မျိုးကြီးနော် .. ” “ အင်းဟင်း .. ဒါဖြင့် အမြဲတတ်ထားပေးမယ်လေ … ”“ ဟင့် .. သွား .. ကောင်စုတ်နော် .. ဒီက အကောင်းပြောတာ … ” “ ဆောင့်မယ်နော် … နင့်စောက်ပတ်ကို လက်နဲ့ဖြဲထားပေး …” ခင်မေလွင်တယောက် မောမောဟိုက်ဟိုက်အသံနှင့် မာမွတ်အမိန့်ပေးသလိုပင် လက်ချောင်းဖွေးဖွေးလေးနှစ်ဖက်က သူ့ စောက်ပတ်လေးကို ဆွဲ၍ဖဲပေး၏။ အစိလေးကပြူးပြီး ထောင်နေသည်။ ထိုစောက်စိ အောက်ခြေအတွင်းပိုင်း အသားနုလေးများ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ပေါ်ထွက်လာသည်။ စောက်ပတ်အတွင်းမှ ကြထွက်နေသော စောက်ခေါင်းဝ အသားစိုင်များက ရဲရဲနီကာ လီးထိပ်ကြီး မဝင်မီ ခေတ္တမျှ ပိတ်ဆို့ နေကြ၏။ “ဘွတ် ”ခနဲ အသံနှင့်အတူ မာမွတ်၏ လီးကြီးက ခင်မေလွင့် စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ စိုက်နစ်တိုးဝင်သွားရာ … ။ “ အီး .. ဟီး … ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ် ” ခင်မေလွင် .. မချိမဆံ့ပင်ခံစားလိုက်ရလေသည် ။ မာမွတ်၏ လီးကြီးက … ခင်မေလွင့် စောက်ပတ်လေးအတွင်းသို့ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီး လိုးဝင်နေသည်မှာ ပက်ပက်စက်စက်ပင် ။ ဝင်နေဆဲ ကာလမှာပင် မာမွတ်၏ ဖင်ကြီးက တဖြေးဖြေး နိမ့်ဆင်းနေသည်။ “ အအား .. အအား .. အအား .. ဟား.. ကျွတ် .. ကျွတ် ..” “ ထဲ့ .. ထဲ့ … အင့် … အင့် … နာနာလေး .. ထဲ့ .. မာမွတ်ရယ် ” မာမွတ်က ခင်မေလွင်၏ စောက်ပတ်နှင့် ဖင်အကွဲကြောင်းစပ်ကြား .. အသားနုနေရာလေးကို လက်ညှိုးဖြင့် ရစ်ဝိုက်ိကာ ပွတ်သပ်ပေးပြန်သည်။
လီးကြီးက အဆုံးဝင် ထားသဖြင့် တနင့်တပိုးခံစားထားရသော ခင်မေလွင့်ခမျာ … သူ ဖ့င်ကြားထဲကို လက်ညှိုးနှင့် အမွှေခံရပြန်သောအခါ .. ကတုန်ကရီလေးဖြစ်လာကာ … စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းက မာမွတ်၏ လီးတန်ကြီးကို ခါးသိမ်သွားမတတ် ယောင်၍ညှစ်ပြစ်လိုက်ရှာသည်။ “ ကွာ .. မာမွတ် … အဲလို မလုပ်နဲ့ .. ဟင့် .. ဟင့် … မလုပ်ပါနဲ့ဆို … ” “ ခံလို့မကောင်းလို့လား ဟင် … ”“ ယားတယ် .. ဖင်ထဲက တစ်မျိုးကြီးပဲ … ” မာမွတ် ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ … ခင်မေလွင့် ဖင်ကြားကိုမွှေနေသော လက်ချောင်းက လီးတန် နှင့်အတူ စောက်ပတ်ထဲသို့ ညင်ညင်သာသာ ယှဉ်တွဲ ထိုးသွင်းလိုက်ပြန်သည်။ “ အား … ကြည့်ပါလား .. မာမွတ် … ။ နင်နော် … လက်ကောလီးရော နှစ်ခုသွင်း ပြန်ပြီ .. နင်ကြံကြံဖန်ဖန် သိပ်လုပ်တာပဲ .. မာမွတ်ရယ် .. နာတယ် သိလား ။” မာမွတ်က လီးဘေးမှ လက်ညှိုးကို ပြန်နှုတ်လိုက်ပြန်ပြီး … သူ့ ဖင်ကြီးကို မြောက်ခါ မြောက်ခါ ခင်မေလွင့် စောက်ဖုတ်လေးကို ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်လေတော့၏။“ ဘွတ်စွတ် … ဘွတ်စွတ် … ကွိ ပိ … ဘွတ်စွပ် ”“ အင့် … အင့် … အင့် … အင့် … အား … အားးးး ….” “ ထွက် .. ထွက်ကုန်ပြီ .. ခင်မေလွင် .. အ .. အ .. အားးးးး ..” မာမွတ်က ခင်မေလွင့်အပေါ်သို့ ကမန်းကတမ်း မှောက်ချလိုက်ခါ … ဖင်ကို ဆက်ခါဆက်ခါ မြောက်၍ ဆောင့်လိုးလိုက်၏။ လီးတစ်ချောင်းလုံး တဖြင်းဖြင်း မာတင်းသွားသည်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပင် တင်းကနဲ .. တင်းကနဲဖြစ်ခါ … လရေများကို ပန်းထုတ်လိုက်လေတော့သည်။ ခင်မေလွင်လည်း မျက်ဝန်းထဲ၌ မီးပွင့်များ ဖြာထွက်ကုန်ပလား ထင်မှတ်ရအောင်ပင် ခံစားလိုက်ရလေသည် … ။ စောက်ခေါင်းအတွင်း ကျင်ကနဲ… ကျင်ကနဲဖြစ်ခါ ထိန်းမရတော့ပဲ .. အရည်ဖြူဖြူလေးများကို လွှတ်ထုတ်မိလိုက်လေသည်။ ယခုတော့ .. နှစ်ယောက်သားငြိမ်သွားပေပြီ … ။ မာမွတ်၏ ဖင်ကြီးက ဆတ်ခနဲ .. ဆတ်ခနဲ တုန်ခါနေတုန်းဖြစ်သည်။ ခင်မေလွင်က .. မာမွတ်၏ ဖင်ကြီးကို … သူ လ့က်ဖြူဖြူလေး နှစ်ဖက်ဖြင့် .. တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဆွဲကာဆွဲကာဆောင့်ရင်း .. တဟင်းဟင်း တအင်းအင်းနှင့် … တွန့်လိမ်နေရှာလေတော့သည် … … ။ မာမွတ်ကလည်း ခင်မေလွင်၏ ကြီးမားတောင့်တင်းလှသော ဖင်တုံးဖွေးဖွေးဥဥကလေးကို အတင်းပင်ဆွဲဆောင့်၍့ လီးတစ်ဆုံးလိုးကာ .. ထည့်ထားရင်း … သူ့ လီးမဲမဲကြီးက ခင်မေလွင့် စောက်ပတ်လေးအတွင်း၌ .. အရင်းအထိ စိုက်ဝင်နေကာ … အတွင်း၌ တုံခါနေလျက် ရှိနေပေတော့သည်… ။ အခန်းအတွင်း၌ကား .. ခင်မေလွင်နှင့် မာမွတ်တို့နှစ်ယောက်၏ တုန်ရင်လှိုက်မောနေကြသော ရင်ခုန်သံကလေးများကသာ လွှမ်းခြုံလျက် …. ။ပြီးပါပြီ